ချောင်းဆိုးရင် TB ရောဂါလား?TB ရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ? – Burmese Baby
တီဘီရောဂါ (TB) ဆိုတာ ဘက်တီးရီးယားပိုး တမျိုးကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ကူးစက်လွယ်တဲ့ ရောဂါ၊ ပြန့်ပွားလွယ်တဲ့ ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှာ နှစ်စဉ် ရောဂါကူးစက်သူဦးရေ ရာခိုင်နှုန်းများတဲ့ ရောဂါတစ်ခုပါ။
ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန နှင့်် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေမှ ကာကွယ်ရေး၊ကုသရေးတွေကို အကျယ်တပြန့် လုပ်နေပေမဲ့လည်း ထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲနေသေးတဲ့ ကူးစက်လွယ်ရောဂါ တခုအဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲပါ။
(၁) ဘာပိုးလဲ? ဘယ်လိုကူးတာလဲ?
ပိုးနာမည်က Mycobacterium Tuberculosis (မိုက်ကိုဘက်တီးရီးယမ်း ကျူဘာကလို့စစ်)၊ သူနဲ့ အလားတူ အမျိုးကွဲလေးတွေလဲရှိသေးတယ်။ ရောဂါရှိနေသူ ချောင်းဆိုးရင် ပိုးတွေက လေထဲပြန့်ပြီး အဲဒီလေကိုရှူမိတဲ့ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ မည်သူမဆို ရောဂါပိုး ဝင်ရောက်နိုင်ချေ ရှိပါတယ် ။ ဒါဆို ချောင်းဆိုးတဲ့သူတိုင်းမှာ တီဘီပိုးရှိနေသလား မေးစရာရှိပါတယ်။မဟုတ်ပါ။ တီဘီရောဂါပိုးဝင်ရောက်ပြီး ရောဂါဖြစ်ပြီဆိုရင် ချောင်းဆိုးတာ တခုထဲမဟုတ်ပါ။ တခြားလက္ခဏာတွေလဲ ရှိပါတယ်။
အခြားတီဘီ အမျိုးစိတ်တွေရှိပေမဲ့ အဖြစ်များ သော တီဘီနှင့်ဆိုင်ရာကို ဒီမှတ်စုမှာ ဖော်ပြ ပေးပါမယ်။
-ညများစွာ အဖျားတက်ခြင်း၊အဖျားငွေ့ငွေ့နဲ့ မပျောက်ခြင်း
-ညပိုင်း ချမ်းတုန် ချွေးစေးပြန်ခြင်း
-၂ ပတ်ကျော်အထိ ချောင်းဆိုးခြင်း
-အသက်ရှူမဝ၊ စတဲ့ လက္ခဏာတွေ အများဆုးံပြတတ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာများရှိရင် ဆေးရုံမှာ စစ်ဆေးမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
အထက်ကပြောတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိရင် ကျန်းမာရေးဌာနကိုသွားပါ။ ပြောပြပါ။ သလိပ်ထဲမှာ ပိုးရှိမရှိကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ဓာတ်မှန် ရိုက်ခြင်းများ နဲ့ မြန်မာပြည်မှာ စစ်ဆေးပါတယ်။
ရပါတယ်။ သောက်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ မှန်မှန်စွဲပြီးစိတ်ရှည်စွာ လများစွာ သောက်ရပါတယ်။ ဆေးယဉ်ပါးတဲ့တီဘီပိုးတွေကိုလည်း ကုသပေးနေကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဌာနမှာ စောစီးစွာ စစ်ဆေးခံရန် အရေးကြီးပါတယ်။
(၅) ပုန်းနေတဲ့ တီဘီရောဂါရှိသလား?လက္ခဏာတွေ မပြရင်ရော?
ရှိပါတယ်။ ရောဂါပိုး ကူးစက်ထားပေမဲ့ မိမိကိုယ်ခံအားကောင်းနေရင် ရောဂါလက္ခဏာမပြပါ။ Laent TB လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကူးစက်နိုင်တဲ့ အဆင့် မဟုတ်ပါ။ တခြားနိုင်ငံ တွေမှာ စစ်ကြပါတယ်။
ကြိူတင်ကုသကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလဲ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
(၆) ကလေး ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့် ဘယ်လို ဆက်စပ်သလဲ?
ကလေးတွေမှာ မွေးကတည်းက တီဘီပါလာတယ် ဆိုတာ အရမ်းကို ရှားပါးပါတယ်။ ကလေး တွေကို အနီးကပ်ကြည့်စောင်ရှောက်သူမှာ ရောဂါရှိနေရင် ကလေးကို ကူးနိုင်ပါတယ် ။
မိမိကိုယ်တိုင်ရောဂါမရအောင်၊မိမိမှာရှိနေရင် မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို မပြန့်ပွားအောင် ကာကွယ်ရပါမယ်။ ကိုယ်ခံအားနဲတဲ့ သားသားမီးမီးဖိုးဖိုးဖွားဖွား တို့ဟာ ရောဂါပိုးဝင်ရောက်ရင် ပိုပြီး မြန်မြန်လက္ခဏာပြတတ်တယ်။ ရောဂါဆိုးဝါးမှု ပြန့်ပွားမှုမြန်တတ်တယ်။
-ချောင်းဆိုး၊နှာချေရင် ပါးစပ်ကိုအုပ်ပါ၊ လက်မှန်မှန်ဆေးပါ၊သူများမအုပ်ရင်လည်း ကိုယ်အုပ်ပါ၊၊ပြောတဲ့ လက္ခဏာတွေပြရင်ဆေးခန်းပြပါ။
တီဘီရောဂါ အဖြစ်များသောနိုင်ငံတွေမှာ တီဘီကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ် ။ ဘီစီဂျီ(BCG) လိုခေါ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို ကာကွယ်ဆေး အချိန်ဇယားမှာ ထားရှိပါတယ်။ သားသားမီးမီး တို့ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပါ။ ကာကွယ်ဆေးက ရာခိုင်နှုန်း ပြည့် မကာကွယ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် အခြား ကာကွယ်နည်းများဖြစ်တဲ့ ပါးစပ်ကိုအုပ်ခြင်း၊လက်မှန်မှန်ဆေးခြင်း၊အာဟာရပြည့်ဝစွာ စာသောက်နေထိုင်ခြင်း၊ ရောဂါလက္ခဏာပြရင် စစ်ဆေးမှုအမြန်ခံယူုခြင်း စတာတွေဟာ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ကုသမှု နောက်မကျစေရန်ပါ။
(၈) အဆုတ်တီဘီ အပြင် အခြားတီဘီရှိသေးလား?
ရှိပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုးံက အဆုတ်ကိုပြန့်တာပါ။ ဒါကြောင့်သိထားဖိူ့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီမှတ်စုလေးနေတဆင့် တီဘီရောဂါ အခြေခံအကြောင်းအသိပညာ ပြန့်ပွားပြီး သားသားမီးမီးလေးတွေ တီဘီရောဂါမကူးစက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ။
KK (Child Heath Myanmar)